I-Malware Nezindlela Zokugwema I - I-Semalt Izokubonisa Ngambalwa Amasu
U-Julia Vashneva, i-8 (Semalt iMenenja yeMpumelelo yeMakhasimende Ephezulu, uzovula amehlo akho kwezinye izinkomba ezidingekayo uma zihlaselwa yi-malware.
Cishe sonke sisebenzelana namagciwane wekhompuyutha kanye ne-malware kwenye ingxenye yezimpilo zethu. Ngilungile? Akuyona injabulo yokuba nama-virus; Kunalokho, kufanele ukhathazeke ngokuphepha nokuvikeleka kwakho kwe-intanethi kusengozini. Uma ikhompyutha yakho iqala ukuhlehlisa, yisikhathi lapho kufanele ugweme i-malware futhi uthathe izinyathelo ezinzima.
Sebenzisa ukuvikelwa okukhethiwe kuwo wonke amaphuzu
Into yokuqala okufanele uyenze ukusebenzisa ukuvikelwa okukhethiwe kukho konke. Lokhu kuzogcina uhlelo lwakho luphephile kusuka ekuhlaselweni okusekelwe kuwebhu, ukukhubazeka kwe-intanethi, ukuguqula amagciwane nokulandwa ngokushayela. Ukuze uthole ukuvikelwa okuphezulu, kufanele usebenze isofthiwe yakho yokuvikelwa kokusongela inethiwekhi bese uskena idivaysi kanye noma kabili ngesonto. Ungazama futhi uhlelo lwe-Intrusion Prevention Systems, i-Firewall, i-Insight, i-SONAR, ne-Antivirus yokuphepha kwakho kwe-intanethi. I-Symantec Security Response ithi kufanele sigcine izinhlelo zethu zesofthiwe nezinhlelo zokusebenza kusesikhathini.
Nciphise indawo yokuhlaselwa
Ukunciphisa ukuhlaselwa kwesibalo ngokwezinga elikhulu kubalulekile. Kufanele ukhiphe izicelo ongazisebenzisi. Ngivumele lapha ngitshele ukuthi izingozi eziphezulu noma ezibucayi zingabangela umonakalo omkhulu kuhlelo lwakho. Yingakho kufanele uskena idivayisi yakho kanye ngosuku bese uhlala kude nokufaka isofthiwe engaziwa neyingafuneki.
Thuthukisa izilungiselelo ze-Symantec Endpoint Protection ezizenzakalelayo
Ukuthuthukisa izilungiselelo zakho zokuvikelwa kokuphawula kwe-Symantec kubalulekile..Ngisho nezilungiselelo ezimbalwa zingaletha izinguquko ekuvikeleni kwakho kwe-intanethi. Kufanele ugcine izilungiselelo ngezidingo zakho zonke futhi uqinisekise ubumfihlo bakho ukuze abaduni bangakukhohlisi.
Gcina ama-plugin wesiphequluli avuselelwe
Iningi labahlaseli lihlola iziphequluli zakho bese uzama ukuthelela amasistimu akho. Yingakho kubalulekile ukugcina izilungiselelo zesiphequluli sakho nama-plugin asesikhathini. Akufanele neze usebenzise i-Internet Explorer, i-Acrobat, i-Flash, ne-Abode Photoshop ngaphandle kokuskena ikhompyutha yakho noma idivayisi yeselula. Amagciwane amaningi ne-malware angena ohlelweni lwakho nge-Internet Explorer. Ngakho-ke, kungcono ukuhlala kude nalesi siphequluli bese uzama i-Google Chrome noma esinye isiphequluli ozikhethelayo.
Vimbela ukusetshenziswa kwe-P2P
Enye yezindlela ezilula futhi ezisheshayo abaduni abazisebenzisayo ukusabalalisa i-malware yizinhlelo zokuxhumana zontanga (pe-to-peer (P2P). Kufanele njalo uvimbele ukusetshenziswa kwe-P2P. Ngenxa yalokhu, ungakha futhi uphoqele izinqubomgomo ezingezona-P2P ezifana nokusebenzisa ikhompyutha yakho kufanele zivinjelwe ukuze kungabikho ongaphandle ongakwazi ukufinyelela kudivayisi yakho. Ngale ndlela, ungaqiniseka ukuthi ikhompyutha yakho igcinwa kusuka kuma-malware namagciwane amakhulu kakhulu.
Ungayeka ukufika kwamagciwane kanye ne-malware ngokuvula i-AutoRun. Ngenkathi ulandwa okuthile, kufanele uhlale usivala ukuze izinto ezingadingekile zingatholi efakwe kwikhompyutha yakho.
Qiniseka ukuthi wonke ama-patches ase-OS asetshenziswa
Okokugcina kodwa hhayi okungenani kufanele uqinisekise ukuthi yonke i-patch ye-OS isetshenziswa kahle. Izinkampani ezifana ne-Apple, iMicrosoft ne-Google release service packs, ama-patches wokuphepha kanye nama-hotfixes kumakhasimende abo emhlabeni wonke ngenyanga. Imikhiqizo yabo isisiza ukuba silungise ukukhubazeka kwezinhlelo zethu zokusebenza. Ungathola noma yimuphi walawo mikhiqizo bese ufaka kukhompyutha yakho ukuze uthole ukuphepha okuphezulu nokuvikelwa kwe-inthanethi. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa i-Mac OS X, iWindows noma enye uhlelo lokusebenza, kufanele ubuyekeze njalo iziphequluli nezinhlelo zakho kanye noma kabili ngenyanga.